Nyanzvi Dzozeya Zvinoreva Sarudzo Dziri Kuitwa muAmerica
Kindness Paradza Zanu PF
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika pamwe nedzehupfumi dzinoti hadzioni paine chinochinja pakudyidzana pakati peZimbabwe neAmerica zvisinei nei nekuti ndiyani akunda musarudzo idzi.
Sachigaro musangano reZimbabwe Editors Forum, VaDumisani Muleya, vanoti vakawanda muZimbabwe neAfrica yose vane tarisiro yekuti vari kumirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri weAmerica, VaJoe Biden, vakunde nekuti vari kumirira Republican Party, VaDonald Trump, vanogara vachinyomba vanhu vanobva kune dzimwe nyika uye havadi kuti vanhu ava vagare muAmerica.
Asi nyanzvi munyaya dzehupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute, VaNyasha Muchichwa, vanoti hapana chichachinja zvakanyanya kunyange VaBiden, avo vakambove mutevedzeri wemutungamiri wenyika, vakakunda.
Vanotiwo VaTrump, avo vanova mutungamiri weAmerica pari zvino, vakakunda, vanogona kutoomesera Zimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rese.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vachidzisa paUnversity of Zimbabwe, Dr Prolific Mataruse, vanoti kunyange hazvo VaTrump naVaBiden vakasiyana, vane muonero akafanana paZimbabwe.
Asi vanoti zvinhu zvingatorerukira Zimbabwe pasi paVaTrump nekuti munhu anoita zvemabhizimisi uye vakasununguka kushanda nenyika dzakaoma musoro seZimbabwe izvo zvinocherechedzwa nekusangana kwavakaita nemutungamiriri weNorth Korea.
Dr Mataruse vanoti America inyika inoomesera hurumende dzinotyora kodzero dzevanhu seZimbabwe, zvisineyi kuti ndiyani anenge ari mutungamiri.
VaMuleya vanoti kunyange VaBiden vakakunda, zvirango zvinoramba zviripo kudzamara Zimbabwe yagadzirisa zvinodiwa pasi pemutemo wezvirango weZimbabwe Democracy and Recovery Act of 2001.
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nekudziyadzana nedzimwe nyika, uye vari nhengo yeZanu PF, VaKindness Paradza, vanoti vanoziva kuti kusanduka kwemutungamiri weAmerica hakusandure zvirango kana mutemo wenyika iyi wekudyidzana nedzimwe nyika.
Asi vanoti vachataura nehurumende neparamende itsva yekuAmerica kuti zvirango zvibviswe.
Gurukota rinoona nekudyidzana nedzimwe nyika, VaSibusisio Moyo, vanoti kunyange hazvo pachimboiita kupopotedzana pakati peAmerica neZimbabwe, vari kutaurirana nenyika iyi nechinangwa chekugadzirisa hukama pakati penyika mbiri idzi.
Kunyange hazvo paine zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende, America ndiyo nyika inopa rubatsiro rwakanyanya kuZimbabwe munyaya dzehutano, chikafu, dzidzo nezvimwe.
Kubva muna 1980, America yapa Zimbabwe rubatsiro rwemabhiriyoni matatu nemazana mashanu ezviru zvemadhora ekuAmerica.